Wufuud Afrikana oo London u Tagay Hadal Dhexmara Ethiopia iyo Jwxo-shiil! – Rasaasa News
Wufuud Afrikana oo London u Tagay Hadal Dhexmara Ethiopia iyo Jwxo-shiil!
Dec 20, 2011 Wufuud Afrikana oo London u Tagay Hadal Dhexmara Ethiopia iyo Jwxo-shiil!
Amakaag iyo yaabka ma oday hawl gabay oon aqalkiisaba dhaafin yey Afrikii wada aaday. Kooxda Jwxo-shiil, oo horay u diiday nabada xiligii ay Ethiopia diyaarka ahayd, ayaa haatan oo ayna damaan lahayn diracyo u xidhanayso dumaal.
Suuqyada London waxaa saddexdii maalmood ee ina dhaafay ku jirtay, in London ay joogaan wafti wasiiro Somali Kenyan ah iyo wafti uu hagayo wasiirka arimaha dibada ee Ethiopia. Waxaa la faafiyey in wufuudu u timid wadahadal dhaxmara kooxda Jwxo-shiil iyo Ethiopia. kkkkkkkkkkk – – –
Waxaa isweydiin leh Jwxo-shiil, waa hawlgab ay noloshiisa damaanad qaaday waaxda kaalmaynta dadka aan faa,iidada lahayn ee dalka Ingriiska, goorma ayuu noqday gudoomiyaha “down street” wufuudana loo soo diray.
Warkan waxaa fidiyey kooxda Jwxo-shiil iyo inta yar ee indhaha la,a ee kolka ay fiirsadaan Yutube-ka la sameeyey waa hore qiiroonaya “ma qumana.” In ayna qumanayn waxay qaadanayaan hadaaqa ah xornimaa dhaw iyo ciidamada Ethiopia maalin dhaw way kala tagayaan.
Xaqiiq waxaa ah in ay dhinteen dadkii waday ama abuuray fikirkii xornimo doonka ee ururka ONLF, intii ka hadhayna nabad ay qaadatay.
Sida aan la socono Kooxda Jwxo-shiil, suuqii nabadu wuu ka xidhmay awood ciidana waa loo sheegtay, dhawr goor ayey codsi nabadeed u gudbisteen Ethiopia. Jawaabta la siiyeyna waxay ahayd nabad la,aan idinkuma hayso dalal aad joogtaan, degaanka Somalidana nabad baa ka jirta. Hadii aad u iman la,adiin dalka dambiyadii aad gasheen, waxaana idiin soo diri doonaa Sayyidka.
“Been oroday runi ma gaadho,” waxaa maalitii Sabtida ahayd shir ku qabtay London Thomas C. Mountain, oo ah wariye Ingriisa oo lacag kaga gurta dalka Eritrea, qoraalo uu samayeeyo oo lid ku ah Ethiopia, maadaama uu yahay nin cad oo nasab ah. Waxaa kulanka kala qayb galay labo Somali oo waxbaan baranay buufis u hayo Sakariye Leelkase iyo Guure Abgaal.
Thomas C. Mountain, waxaa uu sheegtaa in uu yahay wariye madax banaan laakiin waa nin ay Eritrea qoraalkiisa hanti ku beeshay. Waa ninka isaga iyo Eritrea wada sameeyeen ururka aan jirin ee “Pan East Africa”. Qoraal gaara ayaan ku soo qaadan doonaa Thomas iyo saddexda ninba ee kaleba.
Waftiga wasiirada Somali Kenyanka ah ee la sheegay in shir heshiisiin Jwxo-shiil iyo Ethiopia ay ka qayb galeen, waa ninka madow ee dhinaca fadhiya cadaanka [Thomas Mountain,] oo isagu ah nin asal Somali Kenyan ah in badana deganaa dalka Ingriiska ina hooyana la ah nin la yidh wuxuu ka mid yahay waftiga Kenya.
Waxaan suurto gal ahayn in masuul Kenyan ah nooca uu doonaanba ha ahaadee beel ahaan mooyee in uusan siyaasiyan ula kulmi karin kooxda Jwxo-shiil. Ethiopia-na waligeed ma ayna ogolaan gacan sadexaad.
Wasiirka arimaha dibada Ethiopia ee la sheegay in uu ka qayb galay shir lagu heshiisiinayo kooxda Jwxo-shiil iyo Ethiopia, waa nin Eritreana oo ka shaqeeya Safaarada, waana ninka soo abaabulay kulanka.
Kulanka Thomas C Mountain, ayey kooxdu ka dhigtay in ay arimo u socdaan Ethiopia. Wakiilka Kenyan-ka ee la magac dhabay, wauxuu degan yahay dalka Ingriiska.
“Aji ku hel ayaankee” Waa xaqiiq in Ethiopia ay diiday, kulan kooxda Jwxo-shiil, u asooshay. si ay kooxdu u soo jiidato indhaha Ethiopia ayay wadaa Jaaliyad dal hebal baa shirtay iyo Jaaliya dal hebal baa shir qabanaysa.
Ethiopia wax kasta oo ay kooxdu samayso way dhaafin wayday in Sayyidku kooxda saamaxo, isaga oo aan ka tagayn gacalnimada.
Waxa socda, waa wax ha lagu moodo oo ismuuji iyo haday dhacdo soo dhawaynta. Waxaynu isha ku hayn doonaa tagida London ee Sayyidka bisha ugu dambaysa xaggaaga sida wax u dhacaan.
Google oo Joojiyey 22 Abxadood
Awdal State oo Sanka ku Wadata Somaliland